Moto – Cross Wheels : mbola nisongadina i Kainkona sy Wid | NewsMada
Moto – Cross Wheels : mbola nisongadina i Kainkona sy Wid
Par Taratra sur 25/08/2016
Voahaja ny lôjika. Tontosa, ny 19 – 21 aogositra teo, tetsy amin’ny kianja ivelany Mahamasina (stade annexe), ny andiany voalohany amin’ny hetsika “Cross Wheels” eo amin’ny tontolon’ny môtô. Marihina fa nahitana fifaninanana maro isan-karazany nandritra ny “Cross Wheels”, toy ny scooter, stunt, tuning, sns. Nahomby ny hetsika raha ny filazan’ny mpikarakara, ahitana ny Optimus sy ny Torio.
Tontosa, omaly tetsy amin’ny Falda Antanimena, ihany koa ny fanolorana ireo loka marobe tamin’iny hetsika iny. Anisan’ny nisongadina ary nahazo ny voalohany teo amin’ny fifaninanana scooter sokajy “A” (kit) i Kainkona na i Fabrice raha i Wid kosa ny teo amin’ny sokajy “B” (liquide).
Teo amin’ny “catal amateur” indray, voalohany i Rojokely ary i Lucien kosa ny teo amin’ny “catal confirmé”. Nahazo ny voalohany teo amin’ny sokajy vehivavy i Naeticia.
Ankoatra ireo amboara avy tamin’ny mpikarakara, nahazo “bon d’achat” 150.000 Ar avy tamin’ny Yacco sy ny Veerubber ireo voalohany rehetra isan-tsokajy.
Nambaran-dRalaizafindrakoto Maya, mpikarakara, fa tsy mijanona eo iny hetsika iny fa mbola hitohy ka amin’ny taona 2017 ny andiany faharoa. Tanjon’izy ireo ny hampifandray sy hampifanatona hatrany ireo mpitia môtô tsy ankanavaka.